Sp na-emefu ụbọchị iri atọ na atọ n ’ozi email otu afọ | Martech Zone
Sp na-emefu ụbọchị iri atọ na atọ n ’ozi email n’afọ
Ọnụ ọgụgụ onye na-ere ahịa na-edekọ ihe karịrị awa 2,000 kwa afọ na nkwukọrịta azụmahịa, nke ka ukwuu n'ime ọrụ ndị metụtara ọrụ (39%) na ịgụ / aza ozi ịntanetị (28%). Ọ bụ ezie na ọ ga-adị ka mgbasa ozi mmekọrịta na-aghọ usoro mgbasa ozi kachasị ewu ewu, ebe 72% nke ụlọ ọrụ na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe n'ụdị ụfọdụ, email ka bụ ihe kachasị amasị n'etiti azụmaahịa gburugburu ụwa. Dabere na Akuko McKinsey Global Institute Report, a na-edezi ozi ịntanetị 87 kwa ụbọchị. N'ime ndị America dị afọ 12 na karịa, 94% na-eji email ha oge niile, 58% nke na-enyocha igbe mbata ha ihe mbụ n'ụtụtụ.
Email gbagoro n'ahịa ọ bụla ọzọ nke ahịa na ROI ugboro abụọ, $ 40.56 maka $ 1 niile emere na ahịa email. Ebe nkwukọrịta ozi egosighi ihe ịrịba ama nke ịkwụsịlata, azụmaahịa azụmaahịa na - achọpụta ikpo okwu a. Cirrus Insight na-enye onye ọ bụla ndụmọdụ iji dozie ọdịiche dị na Gmail na Salesforce na ebook ha n'efu Ngwakọta Software na-esote.
Tags: emailigbeinfographicMobile na Mbadamba ụrọNkwado ire ahịa